Mayelana NATHI - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Kusukela ngo-2007, i-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd. ibilokhu igxile ekuboniseni insizakalo yokukhiqiza inkontileka kumakhasimende omhlaba. Isixazululo sethu esisodwa se-turnkey sifaka izinto zokutholwa, ubuqili be-PCB, inhlangano ye-PCB, isakhiwo sebhokisi lepulasitiki / lensimbi, umhlangano omncane wokuqedela imikhiqizo yomhlangano. Ikhwalithi iqinisekisiwe.
Ngaphezu kwe-EMS, i-Fumax R & D ingasiza amakhasimende ukuklama amaphrojekthi amasha ahlukahlukene futhi aphendulele imibono yawo kumikhiqizo yangempela. Izinsizakalo zethu ze-R & D kufaka phakathi ukwakhiwa okusha komkhiqizo, ukwakheka kwe-elekthronikhi, ukwakheka kwe-PCB, ukwakheka kwemishini, ama-prototypes kanye nomshayeli wokugijimela ekukhiqizweni ngobuningi. Sisebenzisa abasebenzi abangaphezulu kuka-300 abaqeqeshwe kakhulu ngosayizi wefektri abakha indawo ephelele yamamitha ayi-squre ayi-5,000.
Ithimba le-Fumax lizibophezele ekunikezeni isisombululo esihle kakhulu sokukhiqiza kumakhasimende ethu kusuka kusampula lesilingo kuya ekukhiqizweni kwenqwaba emaphakathi.
Inhloso kaFumax ukuhlinzeka ngesixazululo sokuzikhethela sama-OEMs adinga ukwakheka okugxile futhi okuphendulayo kanye nomlingani wokukhiqiza wevolumu ephakathi, imikhiqizo eyinkimbinkimbi ye-elektroniki.
Sizuze futhi sivuselela njalo zonke izitifiketi kufaka phakathi i-ISO90001, CE, FCC, UL, ROHS, ukuqinisekisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Ikhasimende Kuqala - Ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuklama nokuqamba ezizinikele nezintsha ngobuqotho kumakhasimende ethu; ukubanika inzuzo yokuncintisana nokuguquguquka, ubuchwepheshe, isikhathi sokumaketha, nezindleko eziphelele.
Ukuba owaziwa njengomlingani onokwethenjelwa othuthukisa futhi akhiqize imikhiqizo esezingeni lomhlaba kumakhasimende ethu, ngenkathi kuklonyeliswa abasebenzi bethu nabaninimasheya.
Ukugculiseka kwamakhasimende, ukuvumelana nezimo, ubuqotho, umthwalo wemfanelo, umhlinzeki wezixazululo, ukusebenza kwethimba.